.အိမ်မရှိလျှင်ဇိမ်မရှိနိုင်ပါ ကိုယ်ပိုင်အိမ် အရိပ်မရှိကြသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်. – Thukhuma
.အိမ်မရှိလျှင်ဇိမ်မရှိနိုင်ပါ ကိုယ်ပိုင်အိမ် အရိပ်မရှိကြသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်.
အိမ်မရှိလျှင်ဇိမ်မရှိနိုင်ပါကိုယ်ပိုင်အိမ် အရိပ်မရှိကြသေးသူများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ် နံနက်စောစောထပါ ပျင်းရိခြင်း မောဟကိုပယ်ပါ။ သရဏဂုံ၃ပါးဆောက်တည် ငါးပါးသီလခံယူပါ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ပါ
ဖြစ်နိုင်ရင်ကျနော်အခုတင်ပေးထားသည့်အိမ်တော်ရာစေတီပုံတော်ကိုဝယ်ကြပါ။ မန်းတလေးအိမ်တော်ရာစေတီ ရန်ကုန်အိမ်တော်ရာ စေတီ ကြိုက်ရာ စေတီပုံတော်ကို ဝယ်ယူထားပါ။ အိမ်ပြင်ဆောက်ရန်အတွက်အခက်အခဲဖြစ်နေကြသူများ
အိမ်ဆောက်လက်စဆက်မဆောက်နိုင်ကြသူများ အဓိဋ္ဌာန်ဝင်ကြည့်ကိုယ်တိုင်သိရပါလိမ့်မယ် လူတိုင်းကိုယ်ပိုင်အိမ်နဲ့ နေချင်ကြစမြဲပါ မကြာခင် သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းမှာ အကျယ်ပါလာပါလိမ့်မယ်။
စာမူတွေ ရောက်သွားပါပြီ။မိမိသည်အဓိဋ္ဌာန်ဆောက်တည်ပါပုတီး ၂ပတ် အနည်းဆုံး စိပ်ပါ၉ပတ်စိပ်လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။သစ္စာပြု ဆုတောင်းပါ ကိုယ်ပိုင် အိမ်အရိပ် ရရှိရပါလို၏လို့။ ပုတီစိပ်ရန် ဂုဏ်တော်ကားဗောဓိ ဗုဒ္ဓေါ မဟာဃရော။
ပုတီးတစ်လုံးဗောဓိ ဗုဒ္ဓေါ မဟာ ဆာယော။ ပုတီးတစ်လုံးအနက်မြန်မာပြန်ဗောဓိသစ္စာလေးပါးကိုသိမြင်တော်မူသောဗုဒ္ဓေါ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာဃရော သတ္တဝါတို့၏ ခိုနားရာ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်သော အိမ်ကြီးသဖွယ်နှင့် လည်းတူတော်မူပါပေ၏
။ဗောဓိသစ္စာလေးပါးကို သိမြင်တော်မူသော ဗုဒ္ဓေါ မြတ်စွာဘုရားသည် မဟာဆာယော သတ္တဝါတို့၏ ခိုနားရာ ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်သော အရိပ်ကြီး သဖွယ်နှင့်လည်းတူတော်မူပါပေ၏အားလုံးကိုယ်ပိုင်အိမ် အရိပ်ရရှိကြပါစေ။
ဤမဟာဂုဏ်တော်၂ပါးကိုအမြဲအာစိန္နကံအဖြစ်နေ့စဉ် ပုတီးစိပ် ပူဇော်သွားပါက ပစ္စု ပ္ပန် တင် မကသံသရာပါ ဖြစ်ရာဘဝ နေစရာ အိမ်ဘုံဗိမာန်များ အတွက် ပူစရာမလိုတော့ပဲ သိကြားဖန်ဆင်းသော အိမ်ကိုပင် နေရသော ဇောတိကသူဌေးကဲ့သို့ ဘုန်းတန်ခိုး ကြီးမား ပါလိမ့်မည်။
အိမ္မရွိလွ်င္ဇိမ္မရွိႏိုင္ပါကိုယ္ပိုင္အိမ္ အရိပ္မရွိၾကေသးသူမ်ားအတြ က္ရည္႐ြယ္ၿပီး တင္ေပးျခင္းျဖစ္ပါတယ္ နံနက္ေစာေစာထပါ ပ်င္းရိျခင္း ေမာဟကိုပယ္ပါ။ သရဏဂုံ၃ပါးေဆာက္တည္ ငါးပါးသီလခံယူပါအဓိ႒ာန္ဝင္ပါ
ျဖစ္ႏိုင္ရင္က်ေနာ္အခုတင္ေပးထားသည့္အိမ္ေတာ္ရာေစတီပုံေတာ္ကိုဝယ္ၾကပါ။မန္းတေလးအိမ္ေတာ္ရာေစတီရန္ကုန္အိမ္ေတာ္ရာ ေစတီ ႀကိဳက္ရာ ေစတီပုံေတာ္ကိုဝယ္ယူထားပါ။
အိမ္ျပင္ေဆာက္ရန္အတြက္အခက္အခဲျဖစ္ေနၾကသူမ်ား အိမ္ေဆာက္လက္စဆက္မေဆာက္ႏိုင္ၾကသူမ်ား အဓိ႒ာန္ဝင္ၾကည့္ ကိုယ္တိုင္သိရပါလိမ့္မယ္ လူတိုင္းကိုယ္ပိုင္အိမ္နဲ႔ ေနခ်င္ၾကစၿမဲပါ မၾကာခင္ သူရဇၨမဂၢဇင္း မွာ အက်ယ္ ပါလာပါလိမ့္မယ္။
စာမူေတြ ေရာက္သြားပါၿပီ။မိမိသည္အဓိ႒ာန္ေဆာက္တည္ပါပုတီး ၂ပတ္ အနည္းဆုံး စိပ္ပါ ၉ပတ္စိပ္လွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။ သစၥာျပဳ ဆုေတာင္းပါ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္အရိပ္ ရရွိရပါလို၏လို႔။ ပုတီစိပ္ရန္ ဂုဏ္ေတာ္ကားေဗာဓိ ဗုေဒၶါ မဟာဃေရာ။
ပုတီးတစ္လုံးေဗာဓိ ဗုေဒၶါ မဟာ ဆာေယာ။ ပုတီးတစ္လုံးအနက္ျမန္မာျပန္ေဗာဓိသစၥာေလးပါးကိုသိျမင္ေတာ္မူေသာဗုေဒၶါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာဃေရာ သတၱဝါတို႔၏ ခိုနားရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အိမ္ႀကီးသဖြယ္ႏွင့္ လည္းတူေတာ္မူ ပါေပ၏။
ေဗာဓိသစၥာေလးပါးကို သိျမင္ေတာ္မူေသာ ဗုေဒၶါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မဟာဆာေယာ သတၱဝါတို႔၏ ခိုနားရာ ႀကီးက်ယ္ ျမင့္ျမတ္ေသာ အရိပ္ႀကီး သဖြယ္ႏွင့္လည္းတူေတာ္မူပါေပ၏အားလုံးကိုယ္ပိုင္အိမ္ အရိပ္ရရွိၾကပါေစ။
ဤမဟာဂုဏ္ေတာ္၂ပါးကိုအၿမဲအာစိႏၷကံအျဖစ္ေန႔စဥ္ ပုတီးစိပ္ ပူေဇာ္သြားပါက ပစၥဳ ပၸန္ တင္ မကသံသရာပါ ျဖစ္ရာဘဝ ေနစရာအိမ္ဘုံဗိမာန္မ်ား အတြက္ ပူစရာမလိုေတာ့ပဲ သိၾကားဖန္ဆင္းေသာ အိမ္ကိုပင္ ေနရေသာ ေဇာတိကသူေဌးကဲ့သို႔ ဘုန္းတန္ခိုး ႀကီးမားပါလိမ့္မည္။